अख्तियारबाट जोगिन सेनालाई जिम्मा ! | Nepal123.com
Posted in अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, बिशेष, सिफारिस, स्वास्थ्य सामग्री
Author: Binod Ghimire Published Date: April 4, 2020 LeaveaComment on अख्तियारबाट जोगिन सेनालाई जिम्मा !
समान्यतः अहिले राष्ट्रिय संकटको अवस्था हो । स्वास्थ्य संकटका बेला हामीलाई सबैभन्दा छिटो माध्मयबाट औषधी र उपकरण चाहिएको छ । सरकारले एकपल्ट प्रयास गर्‍यो, त्यो असफल भयो ।
यो अवस्थामा सरकारले आत्तिएर सेनालाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रका निर्माणका कामहरुमा सेनालाई प्रयोग गरियो, त्यो पनि आलोचनाको विषय थियो । अब अन्य मुलुकहरुसँग पनि व्यापारमा प्रयोग गर्नु यो नैतिक पक्ष छ, सदाचारको पक्ष ।
सबै हिसाबले हेर्दा यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । यसमा किन सेनालाई अघि सारेको देखिन्छ भने नेपालको संविधान र कानूनले सेनाले गरेका क्रियाकलापहरु अख्तियारले छानविन गर्ने दायारमा पर्दैनन् । त्यसैले यो एउटा खरिद प्रक्रियाले शंकाको सुई मन्त्रालय वा सम्वन्धित मन्त्री या त्यो संयन्त्रतिर शंकाको सुई सोझियो ।
जुन मोलमा सामग्री किनियो, जे-जस्ता चिजहरु आए, कामको अनुभव नगरेको जस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो, यी सबै प्रक्रियाबाट त्यहाँ भष्ट्राचारको प्रशस्त गन्ध आएको छ ।
अब अर्को खरिदमा पनि फेरि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । र, यसबाट बच्न सेनालाई दियो भने त टन्टै साफ हुन्छ, सेनाले लिएर आयो भने ठीकै छ, ल्याउन सकेन भने पनि दोषबाट पन्छिन सकिन्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ।
कुनै किसिमको खरिदमा तलमाथि भए पनि त्यो सेनालाई दिँदा छानबिनको दायराभन्दा माथि उठ्ने नै भयो । यो सबै हिसाबले सरकार आफू जोगिने हिसाबतिर लागेको देखिन्छ । यसो गर्नु बेठिक हो ।
सेना जे कामका लागि स्थापना भएको हो, आधारभूतरुपमा त्यसलाई त्यही काममा लगाउनु उत्तम हुन्छ
सरकारको अहिलेको यो निर्णयमा अख्तियारबाट जोगिने हिसाबले नै सेनालाई अगाडि सारेको देखि&
Tagged अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, बिशेष, सिफारिस, स्वास्थ्य सामग्री
← China Mourns Silence For COVID-19 Victims
बेलायत, जर्मनी र क्यानडामा उडान गर्दै नेपाल एयरलाइन्स →